PSJTV | वसन्तपुरमा चीर ठड्याइएसँगै होली पर्व सुरु
वसन्तपुरमा चीर ठड्याइएसँगै होली पर्व सुरु
काठमाडौं : बिहीबार काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित वसन्तपुरमा होलीको चीर ठड्याइएको छ । बिहान ११ः४५ को साइतमा ३२ फिट उचाइको रङ्गीबिरङ्गी ध्वजासहितको चीर उठाइ फागुको विधीवत सुरुवात गरिएको हो ।
चीर ठड्याएसंगै देशभर औपचारिक रूपमा होली पर्व सुरु भएको धालासिक्व मानन्धर सना गू खलः का सचिव मदनरत्न मानन्धरले जानकारी दिए ।
फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमा सम्म होमी पर्व मनाइन्छ । होली पर्व एकआपसमा भाइचारा बढाउने, असत्यमाथि सत्यको विजय, वसन्त ऋतुको आगमन, खुसीयाली बाँढ्ने उद्देश्यले मनाउने गरिन्छ ।
यस वर्ष काठमाडौं उपत्यका सहित पहाडी जिल्लाहरूमा चैत ६ गते र तराईका जिल्लाहरूमा ७ गते होली पर्व परेको छ ।
खुरकोट-घुर्मी सडक एक सातापछि खुल्यो
राजाले कुमारीलाई चढाएको मुकुट कसले बनायो गायव ?
लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध बिरगन्जमा प्रदर्शन
नायिका पुजा शर्माको महिनाको खर्च ९५ हजार के मा कति ?
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको शुक्रबार १० महिना पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । चार सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले कुनै संकेत ...
23rd May 2019 पिएसजे न्युज
लोकसभा निर्वाचनमा अन्तिम चरणको मतदानअघि भारतीय प्रधानमन्त्री केदारनाथ पुगे र तपस्यामा बसे । उनले त्यहाँको एउटा गुफामा १७ घण्टा तपस्या गरेको बताइएको छ । विपक्षी दलहरुले मोदीले मौन अवधिमा भ्रमण गरेर आचारसंहिता ...
3rd Jun 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौँ: काठमाडौँ महानगरपालिकामा फूल, बोटबिरुवा व्यवस्थापन र हेरचाह गर्दै आएकी उर्मिला पोखरेल फूलको बिरुवाका लागि प्रायः महानगरले तोकेको नर्सरीकै भर पर्छन । सडकमा लगाउने बिरुवाका लागि भने उनी वन कार्यालयमा उपलब्ध मध्यम ...